प्रियंकाका पति निक जोनसले बच्चा लिएको तस्विर सार्वजनिक, आयो बधाईको ओइरो – List Khabar
Home / समाचार / प्रियंकाका पति निक जोनसले बच्चा लिएको तस्विर सार्वजनिक, आयो बधाईको ओइरो
प्रियंकाका पति निक जोनसले बच्चा लिएको तस्विर सार्वजनिक, आयो बधाईको ओइरो
admin January 24, 2022 समाचार Leaveacomment 37 Views
एजेन्सी । छोरी, अभिनेत्री र मायालु पत्नी बनेपछि भारतीय गर्ल प्रियंका चोपडा अब आमा बनेकी छिन् । प्रियंका र निकको घरमा एउटा सानो परीले जन्म लिएको छ । प्रियंका र निक सरोगेसीको माध्यमबाट अभिभावक बनेका छन् । योसँगै फिल्म विश्वकै चर्चित जोडीको अभिभावक क्लबमा सामेल भएको छन् । प्रियंका र निक आफ्नी छोरीसँगको नयाँ जीवनलाई अविस्मरणीय बनाइरहेका छन्
निक जोनसको सानो बच्चासँगको तस्बिर भाइरल भएको छ
प्रियंका चोपडा र निक जोनसकी छोरीको जन्मले फ्यानहरूलाई वर्षकै सबैभन्दा ठूलो उपहार दिएर निकै उत्साहित बनाएको छन् । फ्यानहरू यो जोडीको छोरीको झलक पाउन आतुर छन् । यसैबीच निक जोनसको सानो बच्चासँगको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भइरहेको छ । धेरै प्रयोगकर्ताहरूले निकको बच्चाको फोटो सेयर गरिरहेका छन्। तस्बिरमा निकले सानो बच्चालाई समातेका छन् र बच्चाको निधारमा मायालु चु म्ब न गरिरहेको देखिन्छ।
बच्चासँग निकको तस्बिरमा फ्यानहरूले बधाई दिइरहेका छन्
सानो बच्चासँग निक जोनसको भाइरल फोटोमा, फ्यानहरूले बच्चाको जन्मको लागि जोडीलाई बधाई दिइरहेका छन्। धेरैलाई तस्बिरमा निकको काखमा देखिएको बच्चा प्रियंका र निकको हो भन्ने लागेको छ । तर तपाईलाई बताउन चाहन्छौं कि यो प्रियंका र निकको छोरी होइन, बच्चासँग निकको यो थ्रोब्याक फोटो हो, जुन यतिबेला सोशल मिडियामा धेरै शेयर भइरहेको छ।
निकसँगको बच्चाको तस्बिरमा फ्यानले यस्तो प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । भाइरल तस्बिरको कमेन्टमा एक प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्– मलाई निक भाइको बच्चा लाग्यो । अर्का प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्– बेबी प्रियंकालाई भगवानको आशीर्वाद।
एकै साथ, धेरै प्रयोगकर्ताहरूले जोडीलाई बधाई दिइरहेका छन् र बच्चालाई प्यारो भनेका छन्। भाइरल फोटोमा निक र प्रियंकाको बच्चा नहुन सक्छ, तर हामी पनि दम्पतीको सानो राजकुमारीको झलक पाउन प्रतीक्षा गर्न सक्दैनौं।
Previous नेपालमा आज पनि ठुलो संख्यामा थपिए नयाँ को-रोना संक्रमित, कुन जिल्लामा कति संक्रमित थपिए ? (हेर्नुहाेस् विवरण सहित)
Next अब इन्स्टाग्राममा हुनेछ मोटो कमाई, लञ्च भयो नयाँ फिचर ! लिनुहोस जानकारी